"Orthomol" (भिटामिन): निर्देशन, किसिम, मूल्य, समीक्षा
स्वास्थ्य, पूरक र भिटामिन
Multivitamin र खनिज जटिल पोषक को संवर्धन लागि यसको आवश्यकता, "Orthomol" को रूपमा जानिन्छ आधारमा, शरीर डिजाइन। भिटामिन सबै मानव जीवन प्रक्रिया को काम पत्र मदत। तपाईं शरीर मा प्राकृतिक पदार्थ को समय जम्मा मा भर्न भने, त्यहाँ एक विशेष सिस्टम को विफलता र धेरै रोगहरु यसको विकास एक उच्च जोखिम छ। यी भिटामिन मानव स्वास्थ्य बढाने, यी प्रक्रियाहरू रोक्न यसको कार्य।
Multivitamin र खनिज जटिल "Orthomol" - यो दबाइ के हो?
शरीर र मानव स्वास्थ्य को समग्र सुदृढ मा भिटामिन र खनिज को Replenishment एक प्रमुख चुनौती "Orthomol" दबाइ छ। यो समूह काम भिटामिन निम्नानुसार: तिनीहरूले मानव शरीर पोषक बिस्तारै, सकारात्मक परिणाम राख्न लामो समय संग saturate।
यस दबाइ - Multivitamin खनिज जटिल, उद्देश्य आधारमा घटक को व्यक्तिगत चयन संग। यो खेलाडीहरूलाई, गर्भवती महिला, पुरुष वा वृद्ध मान्छे एक पूर्ण बिभिन्न संरचना additives चाहिन्छ भनेर चिनिन्छ। यसलाई द्वारा "Orthomol" लागूपदार्थको लक्षित विरामीहरु विभिन्न विभाग मा खनिज पदार्थ को आवश्यकता बैठक छ। भिटामिन आफ्नो उमेर र व्यक्तिगत आवश्यकता आधारमा, उच्च भार र तनाव को प्रभाव बाट मानिसहरूलाई रक्षा।
Multivitamin खनिज जटिल जीव को Pharmacological कार्य
माथिको निरूपण निम्न गुण छ:
यो उद्देश्य आधारमा उपयोगी पदार्थ संग शरीर समृद्ध;
कपाल र नङ बलियो;
तरुण छाला बढावा र सौन्दर्य संरक्षण;
यो शरीर रिफ्रेस;
यो निराशा को लक्षण समाप्त;
यो तनाव को प्रभाव विरुद्ध सुरक्षा।
यो भिटामिन जटिल मात्र प्राकृतिक भिटामिन र खनिज बनेको र संसारको कुनै analogues छ छ।
दबाइ को किसिम
कम्पनी को माथि उल्लिखित भिटामिन को धेरै प्रकार को उत्पादन:
दृश्य बलियो बनाउन।
स्वस्थ जोडों र हड्डी लागि।
प्रतिरक्षा प्रणाली को सामान्य कामकाज को लागि।
एक स्वस्थ हृदय र यसको सिस्टम लागि।
क्रममा पुरुष स्वास्थ्य कायम राख्न।
गर्भवती र lactating महिलाहरु को लागि।
मानसिक प्रदर्शन को लागि।
कुल शरीर स्वास्थ्य को लागि।
भित्री कान को रोगहरु मा।
रजोनिवृत्ति समयमा महिलाहरु को लागि।
माथिको उत्पादनहरु एक विशेष दिशा मा मानव स्वास्थ्य बलियो बनाउन मदत।
भिटामिन "Otomol Natal": विवरण
यस दबाइ लाभदायक भिटामिन र खनिज प्रसब पछि जीव र गर्भवती महिला अर्थपूर्ण बनाउन डिजाइन को एक विशेष संयोजन छ।
भिटामिन K1, D3, askorbinka, tocopherol एसीटेट;
आवश्यक फैटी एसिड;
एक महिलाको शरीर मा दबाइ "Orthomol Natal" को प्रभाव:
पाचन प्रणाली सामान्य काम बढावा;
को मूत्र को अंगहरु मा एक लाभदायक प्रभाव;
स्वस्थ कपाल र नङ लागि जिम्मेवार;
यो सामान्य मा शरीर बलियो बनाउँछ।
बच्चालाई को स्वास्थ्य को स्थिति मा माथि-उल्लेख बहु-भिटामिन र खनिज जटिल को प्रभाव:
यसलाई विकास (फोलिक एसिड) को प्रारम्भिक चरणमा विचलन बिना crumbs मा केन्द्रीय स्नायु प्रणाली र हृदय प्रणाली को गठन बढावा;
यो शरीर crumbs चयापचय प्रक्रियाहरू र हर्मोन परिवर्तन नियन्त्रण पारित लागि जिम्मेवार छ जो आयोडिन को आवश्यक रकम saturates;
भ्रूण हड्डी र मस्तिष्क प्रणाली को विकास मा सहायता (भिटामिन D3, R1);
यो बच्चा को प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो;
यो किनभने ओमेगा3फैटी एसिड को crumbs को दृश्य प्रणाली को गठन असर गर्छ।
विशेषज्ञहरु अवरोध बिना गर्भावस्था को समयमा भिटामिन "Orthomol Natal" लिएर सिफारिस गर्छौँ। तर आफ्नो डाक्टर संग परामर्श गर्न आवश्यक छ अघि छ। 30 दिनको लागि डिजाइन यस्तो भिटामिन को प्याकेजिङ्ग, लगभग4हजार rubles खर्च।
भिटामिन "Orthomol Arthro": विशेषताहरु
यस दबाइ निम्न उद्देश्यका लिन सिफारिस गरिएको छ:
उमेर-सम्बन्धित परिवर्तनहरू संग स्वस्थ जोडों कायम गर्न;
arthritic परिवर्तन संग musculoskeletal सिस्टम को प्रदर्शन (चोट लागेको सहेका हड्डी र जोइन्टहरूमा को फलस्वरूप) सुधार गर्न।
भिटामिन को "Orthomol प्लस" प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ:
जोडों र हड्डी को चोट लागेको;
जोडहरुको मा उमेर-सम्बन्धित परिवर्तनहरू;
पोस्ट-दर्दनाक र पोस्ट-ओपरेटिव अवधि (हड्डी र उपास्थि पुनर्स्थापना लागि)।
यस दबाइ खेलाडीहरूलाई लागि सिद्ध छ। कहिलेकाहीं विशेषज्ञहरु विरामीहरु यो समूह, "Orthomol खेल" र "Orthomol कार्डियो" को अन्य परिसर संग धन को संयोजन "Orthomol Arthro" गर्ने सल्लाह दिन्छन्।
यो माथि निरूपण, को बंधन र जोइन्टहरूमा बलियो कि मेरुदण्ड मा relieves दुखाइ, उल्लेख हुनुपर्दछ भडकाऊ प्रक्रिया को विकास रोक्न एकदम जोइन्टहरूमा को गतिशीलता बढ्छ। यसको लागत - 4500 rubles देखि (प्याक प्रति, चिकित्सा को एक महिना को लागि suffice हुनेछ जुन)।
भिटामिन "Orthomol": सिफारिस प्रयोग
"Orthomol" बाट प्रत्येक निरूपण यसको निर्देश पुस्तिका छ। विशेषज्ञहरु मात्र यी भिटामिन को दीर्घकालीन नियमित प्रयोगमा सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि मामला मा उपचार को पाठ्यक्रम मार्फत खोज सिफारिस गरिएको छैन।
2 दाना र एक झोला - "Orthomol" स्वस्थ जोडों दबाइ लागि एक दैनिक खुराक। उपचार को तीन महिना वा छ महिना पाठ्यक्रम अंक पुस्तिका।
को गर्भावस्था भर, डाक्टर महिलाहरु दबाइ "Orthomol" लिन सुझाव दिन्छौं। भिटामिन बालिका को योजना गर्भावस्था अघि तीन महिना प्रयोग गर्न सुरु गर्न मनमोहक छ। नर्सिङ आमा जटिल "Orthomol Natal" lactation सम्पूर्ण अवधि लिन सिफारिस गरिएको छ। हरेक दिन, यी विरामीहरु5ट्याब्लेटको र दबाइ को3दाना प्रयोग गर्न अनुमति (यो सम्भव खानाको समयमा छ)।
निर्दिष्ट खुराक भन्दा बढी र प्रयोगको (वा भोजन अघि) विशेष मोड पालन छैन: विशेषज्ञहरूले प्रयोगको लागि निर्देशन मा संग कडाई पालन गर्न आवश्यक छ कि उल्लेख गरेका छन्।
भिटामिन को "Orthomol" समीक्षा
तपाईं विरामीहरु को प्रतिक्रियाहरू तयारी को, "Orthomol" धेरै सुन्न सक्नुहुन्छ। विशेष सकारात्मक समीक्षा।
को लागूपदार्थ 'Orthomol "समूह बीच थप साधारण Multivitamin खनिज परिसर एक स्वस्थ हृदय र जोइन्टहरूमा लागि गर्भवती र lactating आमा को लागि डिजाइन गर्दै छन् ती, साथै छन्। माथिको भिटामिन लिएर मान्छे, राम्रो स्वास्थ्य पहिले नै उपचार को पहिलो महिना समयमा संकेत गर्छ। साइड इफेक्ट, यी विरामीहरु अनुसार, तिनीहरूले पालन गरिएको छैन। कि, दबाइ पूर्ण सुरक्षित र सबैभन्दा मानव स्वास्थ्य को लागि उपयोगी छ।
भिटामिन "Orthomol": contraindications
यस दबाइ, उद्देश्य आधारमा यसको contraindications छ। भिटामिन को सबै प्रकार को लागि सामान्य contraindications "Orthomol" आफ्नो घटक को idiosyncrasy छ। रोगी दबाइ एक वृद्धि संवेदनशीलता छ भने, त्यसपछि उपचार बन्द गर्नुपर्छ।
गर्भवती महिला र सुत्केरी आमाहरू भिटामिन "Orthomol Arthro" लिन निषेधित छन्। जहाँ त्यहाँ चयापचय विकार को लक्षण हो शरीर मा विरामीहरु, compulsorily गर्नुपर्छ चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्।
Multivitamin जटिल "Orthomol" - मानव शरीर र यसको कार्य गर्न सबैभन्दा उपयोगी थपिएको संयोजन। तयारीको को नियमित प्रयोग राम्रो स्वास्थ्य र एक दुखाइ-मुक्त जीवन प्रमुख छ।
"Laktomarin" - छलछाम वा panacea? मूल्य, उत्पादन विवरण र समीक्षा
आफ्नो बच्चाको लागि सबै भन्दा राम्रो भिटामिन कसरी चयन गर्ने?
सोया प्रोटिन छुट्टयाउनुहोस् को प्रयोग
फाइबर: नोक्सानी र लाभ, गुण, सङ्केत गर्छ र contraindications
'Complivit ophthalmia' भिटामिन जटिल। छोटो वर्णन र प्रयोगको लागि निर्देशन
नियमहरु परिवर्तन: खतरनाक ड्राइभिङ
मैड्रिड गरेको सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयहरु र आफ्नो अमूल्य सम्पत्तिहरू
विद्यालयमा बालिका लागि राम्रो जूता कसरी चयन गर्ने? उपयोगी आशय
डिस्क किन पीसने को बाइक मा ब्रेक, के गर्ने?
रेस्टुरेन्ट "पुस्तकालय", कुर्स्क: वर्णन, मेनु, मूल्य
के राम्रो MKV भिडियो प्रारूप?
फुटबल खेलाडी Stenli Metyuz: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, लक्ष्य र उपलब्धिहरू
को नियमन र संस्थाहरू बीच नगद कसरी लागू गर्न
"Tehnoblok मानक": एक हीटर को प्राविधिक विशेषताहरु